‘नाइट क्लब जाँदा ३ बजेभन्दा अगाडि घर फर्केको रेकर्ड छैन ’ - Nepal Insider
January 21, 2020 782
गायिका प्रितीआले मगरको नाइट लाइफसँग ग’हिरो प्रेम छ । कुनैबेला दोहोरी साँझमा काम गर्दादेखि बसेको यो प्रेम अहिले ग्राहकका रुपमा पनि उस्तै छ । उनी स्टेज कार्यक्रमका लागि जुनसुकै देश जाँदा पनि नाइट लाइफमा रमाएकै हुन्छिन् । उनी विशेष गरी नाइट क्लबमा नाच्न र गजल साँझमा गीत सुन्न रुचाउँछिन् ।
नाइट लाइफसँग जोडिएका केही रोचक किस्सा उनले यसरी सुनाइन्:
रातभरि क्लबमा- कार्यक्रमका लागि कोरिया जाँदाखेरी हामीले एक रातमा चारवटा नाइट क्लब चहारेका थियौं । त्यो दिन म कहिल्यै बिर्सन्न । एकदमै रमाइलो भएको थियो । त्यस्तै युके जाँदाखेरी मसँग एकजना नायिका हुनुहुन्थ्यो । दुईजना सँगै क्लब गएका थियौँ । नायिकाज्यूको झ्याउरे नाच देखेर विदेशीहरु अनौठो मानेर हेरिरहेका थिए । त्यतिबेला एकदमै हाँसो उठेको थियो ।
ग्राहकले मुख छाडेपछि…
संघर्षको सुरुवाती चरणमा म पोखराको दाहोरीसाँझमा काम गर्दाको कुरा हो । एक हुल केटा मान्छेको जमात दोहोरीमा रमाइलो गर्न आएको थियो । तीनवटा टेबल नै भरिएको थियो । म स्टेजबाट कार्यक्रम सञ्चालन पनि गर्थेँ । ग्राहकहरुले अफर गरेको गीत छिटो नहुँदा रिसा’उने त बानी नै हुन्थ्यो । त्यो दिन पनि एकजना रिसा’इरहेका थिए ।
मैले पालो आउँछ, आउँछ भनिरहेकी थिएँ । त्यही पनि सुन्नै नसक्ने अपशब्द बोलेर एउटाले मुख छाड्यो । सहनै सकिनँ । हातमा छ्याइछ्याइ पार्ने बाजा बजाइरहेको थिएँ । त्यही बजाउनेले हा’न्दिएँ । ठूलो झ’गडा भयो । माहोल सम्हाल्नै गाह्रो । मलाई कु’ट्न भनेर बाहिर बाटो पनि ढुकेछन् । तर मलाई पछि दाइहरुले घर पु¥याइदिनुभयो ।
त्यस्तै ग्राहकलाई मादलले हा’नेको घ’टना पनि छ । पोखरामै हुँदा हो । जाँ’ड खा’एर एकदमै तु’च्छ व्य’वहार गरेपछि स्टेजबाटै मादलले हा’नेको थिएँ । दोहोरी, डान्सबारतिर काम गर्ने युवतीलाई नराम्रो दृष्टिले हेर्ने गर्छन् गाह्रकहरु । अनि हेप्न खोज्छन् । यो ठिक प्रवृत्ति होइन ।
दोहोरीमा काम गर्दा त्यस्ता धेरै ग्राहक भेटिन्थ्यो जो खाइरहेको ग्लास स्टेजमै प्र’हार गर्थे । झ’गडा गर्थे । गेष्टलाई गीत गाउन दिने अवसर पनि हुन्छ । अफर गरेको गीत छिटो भएन पनि रिसा’उँछन् । गाउन दियो भने फो’होरी शब्द प्रयोग गरेर हैरान बनाउँछन् । यस्तो धेरै भोगिएको छ ।
साथी सम्हाल्नै गाह्रो-
म प्रायः बहिनी र साथीहरुसँग क्लब जाने गर्छु । नाच्न एकदमै मनपर्छ । क्लब जाँदा म त आफूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नेगरी नै पिउँछु । तर साथीहरुलाई सम्हाल्नै गाह्रो हुन्छ । कोही पिएपछि झग’डै गर्न खोज्छन्, कोही फ्लोरमै ल’ड्दिन्छन्, ब’मिट गर्दिन्छन् । बोकेर घर ल्याउँदा है’रान भइन्छ । यस्तो धेरै भएको छ ।
विदेश र काठमाडौंको नाइट क्लब-
विदेश र काठमाडौंको नाइट क्लबमा धेरै फरक पाएँ । विदेशमा कोसँग आयो, के खायो, के लायो केही मतलब हुँदैन । कोही इन्ट्रेष्ट देखाएर बोल्न चाह्यो, नाच्न चाह्यो भने त्यही खालको रेस्पेक्ट हुन्छ । तर यहाँ त्यस्तो हुन्न । साथीसाथी सँगै नाचिरहेको बेला अर्को केटा जब’रर्जस्ती नाच्न आउँछ, टाँ’सिन आउँछ, घो’च्न आउँछ । यस्तो धेरैपटक भोगियो ।
यस्तै खराब प्रवृत्तिका कारण क्लबतिर झ’गडा धेरै हुन्छ । मलाई काठमाडौंको नाइट लाइफको नराम्रो पक्ष भनेकै आफ्नो तरिकाले इन्जोय गर्न नपाउनु हो । यहाँ हस्तक्षेप धेरै हुन्छ । त्यस्तो देख्दा नरमाइलो लाग्छ । डिस्कोमा छि’रेपछि आफ्नो तरिकाले म्युजिकलाई इन्जोय गर्दै नाच्न पाइयोस् भन्ने लाग्छ ।
म पहिला काठमाडौंमा दरबारमार्गको आइ क्लब बढी जान्थेँ । अहिले डेजा भु जान थालेकी छु । क्लब ११÷१२ नबजी जम्दैन । त्यसैले सुरुमा गजल साँझ छिर्ने गरिन्छ । क्लब पुगेपछि त पूरै रात नाचिन्छ । नाइट क्लब जाँदा ३ बजेभन्दा अगाडि घर फर्केको रेकर्ड छैन । म काठमाडौंमा भएका बेला कम्तीमा महिनामा दुईपटकसम्म त क्लब गएकै हुन्छु । झन् पोखरा त होम टाउन नै भयो । त्यहाँ गएको बेला त लगभग रेगुलरजस्तो नै गइन्छ । नाइट लाइफको मज्जै छुट्टै हुन्छ । त्यो त त्यहाँ गएर रमाउनेलाई मात्रै थाहा हुन्छ ।
Prevसामाजिक संजालमा भाइरल के हो अस्ट्रेलिया का’ण्ड ? यस्तो रहेछ यथार्थ !
Nextअस्ट्रेलिया काण्ड: के भएको रहेछ खास ? युवती आइन् लाइभमा (भिडियो)
शिवरात्रिको दिन गरियो ‘परदेशी २’को शुभमुहूर्त, यस चलचित्रबाट डेब्यु गर्न लागेका प्रकाश सपूतले भने – ‘अधुरो एउटा सपना पनि पूरा हुने भो’
प्रेमलाई न जातले रोक्छ न धर्मले. बढी नम्बर ल्याउने प्रतिस्पर्धा गर्दागर्दै माया बसेको पत्तै भएन
मनछुने कथा “” असल श्रीमती “” महिलाले एकचोटी अबस्य पढौं अनि पुरुषले शेयर गरौँ (39353)